Inkqubo yeChina yokuCoca ngokuSebenza ngokuSebenzayo yokuPholisa iiTowers 'Ukujikelezisa uMvelisi woNyango lwaManzi kunye noMthengisi | Yubing
Inkqubo ye-ICE yokuSebenza ngokuPhakamileyo yokuSasaza yokuSasazwa kweTowers
Amasuntswana anoxanduva lokungcolisa indawo yokudlulisa ubushushu mancinci kune-5 microns. Icebo lokucoca ulwelo lokupholisa amanzi aphezulu kwinqaba eliphezulu lisusa la masuntswana acikizekileyo ukubonelela ngezibonelelo eziyinyani zamanzi acocekileyo okupholisa.
UkuCoca okuPhezulu kweSanti
Ukuphuhliswa kokucoca okuphezulu kwesanti kuguqule ukuhluza kwamanzi okupholisa. Izinto eziqinileyo ezinqunyanyisiweyo ngoku zinokuba lixabiso elisuswe kwi-1/2 micron ngesixhobo sokucoca ulwelo esizenzekelayo. Iifilitha ezindala zetekhnoloji ye-multimedia ziyehla ziye kufikelela kwi-10 yeemicron. Kuba uninzi lwamasuntswana okupholisa amanzi akwinqanaba le-1/5 ukuya kwi-5 leemicron ubukhulu, amacebo okucoca ulwelo aphezulu asebenza ngcono ekususeni ezi zinto zingcolisayo. Ukucocwa okusebenzayo ngakumbi kuthetha iziphumo eziphuculweyo ngesihluzi esincinci. Icebo lokucoca ulwelo oluphezulu lwe-ICE lisebenzisa isanti ye-ultrafine ukubonelela ngokuhluza ngakumbi ngakumbi. Ukuhamba kokuhamba kwamanzi ngaphesheya kobuso beendaba ezigqibeleleyo kuthintela ukuxhoma ngokukhawuleza ngokutyhala ukungcola ukuya kwindawo yokugcina. Ayisiyiyo kuphela into yokuba ukusebenza kwamahluzo kuphuculwe ngokuphawulekayo, kodwa iiseyile zifuna ukuya kuthi ga kuma-10 amanzi angaphantsi okubuyela umva.
Iindleko ezisebenzayo zokucoca
Amacebo okucoca ulwelo aphezulu e-ICE asebenza ngokukuko ekususeni amasuntswana acocekileyo okupholisa iinqaba ukusuka emoyeni. Olu phuculo lusebenzayo luvumela ezi zihluzo ukuba zilinganiswe kangangezihlandlo ezi-4 ukuya kwezi-5 ezincinci kunezihluzi zemultimedia ngelixa zibonelela ngamanzi acocekileyo. Iifilitha zeMultimedia kwicala lomjelo we-5 ukuya kwi-10% yenqanaba lokuphinda ubuye, ngelixa izihluzi ezisebenzayo zifuna kuphela i-1 ukuya kwi-3%. Sukuchitha imali kwizicoci ezinkulu ezingasebenzi kakuhle usebenzisa itekhnoloji yakudala.
Izibonelelo zaManzi acocekileyo acocekileyo
•Imiphezulu yokuhambisa ubushushu ngococeko yenza ukuba izixhobo zisebenze ngokufanelekileyo zikhokelela ekunciphiseni iindleko zamandla.
•Ubomi bezixhobo bandiswa ngenxa yokuncipha kwenqanaba lokudamba.
•Ukusebenza kwonyango lwe-microbial kuyaphuculwa kukhokelela kwindawo esempilweni yomsebenzi.
•Ukugcinwa kwezixhobo kunye nexesha lokuphumla elingacwangciswanga liyacuthwa ngenxa yokucoceka kwesumps, ukugcwaliswa kunye nokutshintsha kobushushu.
Okulandelayo: Inkqubo ye-ICE yeRevenue Reverse Osmosis yeNkqubo yokuPholisa iNqaba yaManzi
Ukupholisa ukuhluza amanzi kwinqaba
okupholisa inkqubo ukuhluza amanzi
Ukucoca amanzi okupholisa ukujikeleza kwamanzi
inkqubo ukuhluza mveliso
inkqubo ukuhluza intlabathi mveliso
Ukucoca isanti kwinqaba yokupholisa
inkqubo ukuhluza intlabathi